Gbasara anyị - Runchen Industry Co., Ltd.
Runchen Industry Co., Ltd. bụ ọkachamara Ice-cream solutions eweta na-akwado site na otu ezigbo ndị ọkachamara nwere injinia nwere ọtụtụ afọ nwere ahụmịhe bara uru na ụlọ ọrụ ice cream, ma ndị na-emepụta akụrụngwa ice ma ọ bụ ụlọ ọrụ ice cream.
Runchen na-enyekarị ọrụ maka ụlọ ọrụ ice cream n'okpuru ebe ndị a:
Mee ma ree akụrụngwa na ngwa nrụpụta ice cream
Usoro mmepụta ihe na ice cream na nhazi usoro, ihe eji arụ ọrụ ebe a na arụ ọrụ injinịa
Nlekọta ụlọ ọrụ, ọzụzụ na onye ndụmọdụ
Ọkachamara ma nwee ahụmahụ na ịmepụta usoro mmepụta ma belata ọnụahịa ntụgharị
Kpamkpam ihe ị na-atụ anya, kacha imewe, àgwà akụkụ na mmiri dị ka nke ọma dị ka a pụrụ ịdabere kwụsie ike, hụ nzute mmepụta chọrọ n'ụzọ zuru okè na-ebelata ọrụ n'iyi.
Anyị ghọtara na usoro nhazi kwesịrị ekwesị na nhazi atụmatụ na ọrụ ọrụ akụ na ụba na-eme ka arụmọrụ dị elu na arụmọrụ na-agba ọsọ. Ọ bụghị naanị mgbe ị na-eme atụmatụ na akwụkwọ mana enwere ike itinye ya n'ọrụ.
Oru oma oru na gi mkpa. Anyị na-ahụ na akụrụngwa gị na-arụ ọrụ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, na mgbakwunye, anyị nwere ike ịkwado na ndozi ndozi, nkwalite akụrụngwa na akụkụ ọrụ akụkụ, yana ịga n'ihu na njikwa nyocha ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nrụpụta ụlọ ọrụ nrụpụta, usoro nhazi na ọrụ ikike ọrụ yana wdg.
Dabere na ọrụ ndị ahịa na uru ọrụ aka, Runchen na-etinye aka na akụrụngwa dị mma yana ọrụ dị mma na nkwado teknụzụ. Anyị na-atụ anya nhọrọ gị na Runchen
Unilever kwadoro Runjin dị ka onye na-eweta ngwaahịa zuru ụwa ọnụ. Ahia anyi erutela Indonesia, Philippine, Australia, South Africa ahia. Anyị na-echekwa ohere azụmahịa na-abawanye. Nke a bụ ihe dị ịrịba ama dị mkpa maka nnabata ndị ahịa.
Runchen guzobere alaka ụlọ ọrụ dị na Taizhou obodo akpọ dị ka Taizhou Runjin Machinery Co., Ltd. Runjin Machinery Co., Ltd nwere a 4000m2 osisi, 60 ọrụ gụnyere 15 technicians ndị nnọọ ọkachamara na ahụmahụ na igwe ubi.
Runchen mere nchọpụta ma mepụta ngwa ọrụ ice cream dị mma, bụ nke ọtụtụ ndị ahịa matara ma wee bụrụ ndị ama ama n’ụwa niile.
Anyị mepụtara ndị ahịa na Chile, Australia, Dubai, Mexico, ahịa ndịda ọwụwa anyanwụ Asia. Iji izute nditịm chọrọ na nri ụlọ ọrụ, anyị setịpụrụ a elu mba ọkọlọtọ banyere anyị na ngwá. All anyị eletriki mmiri na isi akụkụ na-ekwekọghị na a maara nke ọma ika, dị ka Siemens, Bonfiglioli, Schneider, wdg
Mgbe ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ụlọ na mmekọrịta a pụrụ ịdabere na ya wuru, Renchen malitere ịgbasa azụmahịa na ụwa niile.
Ntinye nke mmepe ohuru Ice cream na-agbaji ụdị ọdịnala ma mezuo nke ọma na 2002.
E guzobere Runchen na 2001.